. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: မမြင်နိုင်ခဲ့သော
ကျွန်တော် မမကို လက်ထပ်တုန်းက ကျွန်တော်က အသက် ၂၅နှစ်၊ သူမက ၂၇နှစ် .. မိဘတွေက စီစဉ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်မငြင်းခဲ့သလို မမဘက်ကလည်း ကျွန်တော့်ကိုလက်ခံခဲ့တယ် .. ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရိုးရိုးလေးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး .. ကျွန်တော်တို့ လွယ်လွယ်လေးလက်တွဲခဲ့ကြတယ် ..
မမက ကျွန်တော့အတွက်တော့ သိပ်ကို အိမ်ရှင်မကောင်းပြီသတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက် .. ဟုတ်တယ် .. ဒီထက်မပိုခဲ့ဘူး .. သူမအမြဲတမ်း ကျွန်တော့်ကို ၀တ္တရားဆိုတာထက်မပိုတဲ့ ဂရုစိုက်မှုမျိုးနဲ့ အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်ခဲ့တယ် ..
ကျွန်တော့်မနက် မနိုးခင်ကတည်းက ကျွန်တော့အတွက် မနက်စာ အဆင်သင့် .. ရုံးသွားရင်ဝတ်ဖို့ အ၀တ်အစား လျှော်ဖွပ် မီးပူတိုက်ပြီး အဆင်သင့် .. ရုံးသွားပြီဆို ကျွန်တော့်အိတ်ကိုကိုင်ပြီး ကားပေါ်တက်သည်အထိလိုက်ပို့တတ်တယ် .. ညရော ဘယ်လောက်ပဲ ညဉ့်နက်နက် သူအမြဲထမင်းစားစောင့်တတ်တယ် ..
ခင်ဗျားတို့တော့ထင်လိမ့်မယ် .. မင်းသိပ်ကိုတာဝန်ကျေတဲ့အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ရလို့ ကံသိပ်ကောင်းတယ်လို့ ..
ဟုတ်ပါတယ် .. သူမသိပ်ကိုတာဝန်ကျေပါတယ် .. တာဝန်လည်းသိပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အပေါ် သူဆက်ဆံတာ တာဝန်တစ်ခုထက်မပိုခဲ့ဘူး .. အမြဲ အေးစက်စက်နဲ့ နွေးထွေးမှုမရှိဘူး ..
ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်ပြီး ၂နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ ကျွန်တော်သံသယ၀င်လာတယ် .. ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှားယွင်းနေပြီလား .. သူမဘက်က ဒီလောက် အေးစက်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရတာမပျော်တာတော့အမှန်ပဲ ..
နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်အရင်ကထက် အိမ်ပြန်နောက်ကျလာတယ် .. နေ့လည်စာရုံးမှာစားနေကျဖြစ်သလို ညစာပါ အပြင်မှာ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စားဖြစ်လာတယ် .. သူမကတော့စောင့်မြဲပါပဲ .. ကျွန်တော့်မစားဘူးပြောလိုက်တိုင်းလည်း ပြင်ထားဆင်ထားတဲ့ထမင်းဝိုင်းကို သူအေးစက်စွာသိမ်းမြဲပါပဲ .. ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အေးစက်နေတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ် ..
တစ်ရက် .. ကျွန်တော် သူ့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး အိမ်ကိုစောစောပြန်ခဲ့တယ် .. ၀ရန်တာမှာ ရပ်စောင့်နေတဲ့သူမကိုမြင်လိုက်ရတယ် .. သူမအောက်ဆင်းပြီး ကျွန်တော့ကိုလာကြိုတယ် .. ၀တ္တရားအတိုင်းပေါ့ .. ပြီးတော့ သူမကမေးတယ် ..
"ရေအရင်ချိုးပြီးမှ ထမင်းစားမယ်မလား" တဲ့ ..
"ခဏ မမ .. ဒီမှာခဏလာထိုင်ပါဦး .. ကျွန်တော်ပြောစရာလေးနဲနဲရှိလို့ .."
"ကျွန်တော် ဒီစကားကို ပြောသင့်မပြောသင့် စဉ်းစားနေတာကြာပြီ .. အခြေအနေလည်းစောင့်ကြည့်ရင်းပေါ့ .. ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတော့ ဒီစကားက ခုပြောတာနဲ့ နောက်ပြောတာပဲကွာလိမ့်မယ် .. တစ်ချိန်ချိန်တော့ ပြောကိုပြောဖြစ်မယ့် စကားပဲလို့စဉ်းစားမိလို့ ကျွန်တော်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ .."
ကျွန်တော့ နိဒါန်းရှည်ကို သူမ နားမလည်စွာ ကြည့်ရင်းနားထောင်နေတယ် .. ပြီးတော့ ခေါင်းညိတ်ပြတယ် ..
"ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံမှုကစလို့ ခုချိန်ထိ တစ်ခုခုမှားနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် .. ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံချိန်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်က အရမ်းကိုမြန်ဆန်လွန်းသွားတယ် .. တကယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ ဒီထက်ပို အချိန်ပေးသင့်ခဲ့တာ .. အဲလိုသာဆို ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံရေးက ဒီထက်ပို နွေးထွေးမလားပဲ .. ခုတော့ .."
"သွေး .. မမကိုဘာမကျေနပ်တာရှိလို့လဲ .. မမ ဘာတာဝန်မကျေဖြစ်သွားလို့လဲဟင် .." သူမငြိမ်နားထောင်နေရာကနေ ပြောလာတယ် ..
ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်တယ် .. မဲ့ပြုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. သူမဘာကြောင့် တာဝန် ၀တ္တရားဆိုတာပဲခေါင်းထဲထည့်ထားလဲမသိဘူး .. ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ သူမမေ့နေတာလား .. မချစ်တတ်ခဲ့တာလား ..
"မဟုတ်ပါဘူး .. မမတာဝန်ကျေပါတယ် .. ကျွန်တော့မှာ ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကို တာဝန်ကျေတာပါ .. ဒါပေမယ့်် မမခေါင်းထဲမှာ လင်ယောကျာ်းအပေါ် တာဝန်ကျေဖို့ဆိုတာတစ်ခုကလွဲရင် မမ မသိတော့ဘူးလား .. ကျွန်တော် ဒီအိမ်မှာနေရတာ နှစ်ယောက်သာဆိုတယ် .. ကျွန်တော်သိပ်အထီးကျန်တယ် .. ကျွန်တော်မပျော်ဘူး .." သူမြိုသိပ်ထားသမျှ ပွင့်အံကျကုန်တယ် ..
သူမကတော့ ငြိမ်သက်ဆဲပဲ .. ကျွန်တော့အထင် သူမစဉ်းစားနေပုံပေါ်တယ် .. သူမဘယ်နေရာ တာဝန်လစ်ဟင်းသွားပါလိမ့်လို့ပေါ့ ..
"ဒါဆို သွေးကျေနပ်အောင် မမဘာလုပ်ပေးရမလဲ .." ဒီတစ်ခါအံ့သြမိသူကတော့ ကျွန်တော်ပေါ့ .. ကျွန်တော်ထင်ထားတာ အနည်းဆုံးတော့ သူမမျက်ရည်ကျလိမ့်မယ်လို့လေ .. ခုလောက်သွေးအေးစွာ ပြောထွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူး .. သူမက ကျွန်တော်ကျေနပ်အောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲတဲ့ .. ကျွန်တော်အော်ရယ်လိုက်ချင်တယ် .. နှစ်နှစ်ကျော် အတူနေခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်အရ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မျက်ရည်တော့ကျသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် .. ကျွန်တော်တောင် သူမအပေါ် နှစ်နှစ်အတူရှိခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ ဒီစကားပြောဖို့ အချိန်အတော်ကြာစဉ်းစားခဲ့ရတယ် .. ခုတော့ သူမစကားက ...
"မမက ကျွန်တော်ထင်တာထက်အောင် သွေးအေးသူပဲ .. အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမမျှော်လင့်ထားဘူး .. ထားပါတော့လေ .. မမဘက်က အဆင်သင့်ပဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံးကွာရှင်းကြရုံပေါ့ .. ကျွန်တော် ဒီညကစပြီး အိမ်ပြန်မအိပ်တော့ဘူး .. မမကိစ္စရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့ ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ပါ .. ကျွန်တော်လည်း စာချုပ်စာတမ်း အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ မမကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ် .. ကျွန်တော်သွားတော့မယ် .."
"သြော် .. မမ .. တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ ကျွန်တော့်ကားနားလိုက်ပို့မနေပါနဲ့တော့ .. ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသွားလိုက်ပ့ါမယ် .."
နောက်ရက်တွေမှာ အလုပ်မှာတုန်းက သိပ်မသိသာပေမယ့် ရုံးတက် ရုံးဆင်းချိန်တွေ မှာတွေ သူမကို သတိရမိတယ် .. ယောင်္ကျားတစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် ဒီလိုခံစားရရင် သူမရော .. ကျွန်တော် သိချင်မိတယ် ..
တစ်ရက်နှစ်ရက် မထူးခြားပေမယ့် နေ့စဉ်ရက်ဆက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အထီးကျန်မှုဝေဒနာ ပိုမိုဆိုးရွားလာတယ် .. သူမရော ..
တဖက်ကလည်း ကွာရှင်းဖို့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ရှေ့နေတွေကိုအပ်ထားလိုက်တယ် ..
တစ်ရက်တော့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေဆီက ဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ် .. ကျွန်တော် ဖုန်းလက်ခံပြီးမှာ သူမဆီဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်တယ် .. သူမတော်တော်နဲ့မကိုင်ဘူး .. ခဏအကြာ သူမအသံယဲ့ယဲ့ကို ကြားရတယ် .. ကျွန်တော် သူမကို နောက်နှစ်ရက်နေရင်ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်တယ် .. နောက် ခဏနေတော့ ဖုန်းပြန်ဝင်လာတယ် .. မမ မူးလဲတယ်တဲ့ ..
ကျွန်တော် အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်ကြီးက လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးပြီးလို့ စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေပြီ ..
မမအခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကို ကျွန်တော် ကမန်းကတန်းနဲ့
"ဆရာ ကျွန်တော်ဇနီး အခြေအနေ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဆရာ"
"လူနာက သိပ်အားနည်းသွားလို့ ပရက်ရှာကျသွားတာပါ .. နောက်ပြီးစိတ်နည်းနည်းကျနေပုံပဲ အဲဒါလဲပါတာပေါ့ဗျာ အခုတော့ လိုအပ်တာတွေ ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့လို့ စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပါပြီ စိတ်ပူစရာမရှိတော့ပါဘူး .. ပြီးတော့ အမျိုးသမီးကို စိတ်ချမ်းသာပါစေပေါ့ဗျာ .." လို့ ခပ်ပြုံးပြုံး ဆိုသွားတယ် ..
ကျွန်တော် မမအခန်းထဲ ၀င်လိုက်တော့ ဖြူဖျော့ဖျော့မျက်နှာလေးနဲ့ မှိန်းနေတဲ့ မမကိုတွေ့လိုက်တယ် ..
ကျွန်တော် မမကုတင်နားရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာခဲ့သည်လေ…… ပြီးတော့ ကျွန်တော် မမလက်ကို ဖြည်းဖြည်းလေးဆုပ်ကိုင်လိုက်မ်ိတော့ မမလက်တွေ အရမ်းအေးစက်လို့ ……
"မမ .." ကျွန်တော်နှုတ်က တိုးတိုးလေးခေါ်မိသည် ..
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ တိုးတိုးလေးအခေါ်မှာ မမမျက်လုံးတွေဖွင့်မကြည့်ခဲ့ဘူး .. ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာက မမမျက်ဝန်းထောင့်မှာ မျက်ရည်စတွေ .. ကျွန်တော် ရင်ထဲ နင့်ကနဲဖြစ်သွားတယ် .. ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မမလက်ကလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်လေ.. သတိထားမိလိုက်တာက မမရဲ့ အေးစက်တုန်ခါနေတဲ့လက်လေးတွေက ကျွန်တော့်လက်ကို တင်းတင်းလေး ပြန်ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ .. ကျွန်တော် ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင် ၀မ်းသာသွားမိတယ် ..
ဒီအချိန်မှာ ပြတင်းပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်တော့ ငှက်လေးတွေချောင်းကြည့်နေတယ် .. ပြီးတော့ စကားလာ ပြောတယ်လေ .. မင်းတို့အတွက် ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုက မနက်ခင်းအသစ်နဲ့ ကြိုနေတယ်တယ်တဲ့ ..
ရေးသားသူ moekhar at 12/10/2008 04:59:00 PM
မြေပြင်နင်းသည့်အခါ ကောင်းစွာတည်ထိ ခိုင်မြဲပြီး ဖ၀ါ...
တွေ့သမျှ မြင်သမျှ (၁)